Nigeria - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga
EAI waxay si gaar ah uga shaqaysaa qaybta waqooyiga ee dalkan balaadhan.
Hoyga in ka badan 53 milyan oo qof oo ku nool 19 gobol, waqooyiga waxay leedahay taariikh hodan ah oo murugsan oo ay ku jiraan qarniyo iskahorimaad iyo rabshado u dhexeeya Muslimiinta iyo Masiixiyiinta iyo kooxo diimeedyo Muslimiin ah, oo dhammaantood asal ahaan ka soo jeeda aagga. Sidoo kale waa gobol lagu faano, oo ka kooban Sokoto Caliphate, Galbeedka Afrika dawladdii ugu xoogga badnayd ka hor gumaysiga, iyo dhul dabiici ah oo qurux badan oo ay ka mid yihiin wabiyaal, biyo-dhacyo, iyo buuro.
Sannadkii 2013, EAI waxay awood siisay hawlaheeda ballaaran ee CVE ee Afrika Sahel si ay u hirgeliso telefishanka telefishinka afka Ingiriisiga 24/7 ee ugu horreeya ee Waqooyiga Nigeria, AREWA24. Mashruucaas oo sannado badan socday ayaa u suurtageliyay shaqaalaha EAI ee maxalliga ah inay horumariyaan xididdada qotoda dheer isla markaana cabbiriyaan awooddeena si aan u soo saarno warbaahinta ganacsi-lagu-dabakhi karo ee ku xiran isgaarsiinta bulshada iyo dhaqanka. AREWA24 ayaa hadda ah abaalmarin lagu guuleysto, oo gudaha laga leeyahay, iyo shirkad madaxbanaan oo warbaahineed.
Sanadkii 2016, EAI waxay biloowday xarun Fariin Gobol oo hoos timaad White Dove (Farar Tattabara, sumadda, ku xoojinta aragtida iyo codadka dhalinyarada iyo bulshooyinka si ay ula tacaamulaan arrimaha bulshada.
EAI waxay sii wadeysaa inay ballaariso shabakadeeda ay iskaashadaan si ay awood ugu yeeshaan jiil cusub oo isbeddelayayaal ah iyada oo loo marayo barnaamijyo diiradda lagu saaray dhisidda awoodda, tababarka hoggaaminta, warbaahinta kaqeybqaadashada, teknolojiyada horumarinta, la xisaabtanka dowladda, iyo sinnaanta lamaanaha. Ayadoo la adeegsanayo sumadeynta maxalliga ah ee adag iyo sumcadda sare u qaadidda wax ka qabadka wax ka qabashada arrimaha bulshada iyo dhaqanka, EAI waxay sii wadaa inay hal-abuurnimo isla markaana ku korto Nigeria.
Ka Raadista Muusikadaada Raadiyaha Show Raadiyaha
Iyada oo ay gaarayaan in ka badan 15 milyan oo dhagaystayaal ah, saddexda barnaamijyada raadiyaha ee White Dove waxay awood u siinayaan jiil cusub oo lagu daydo oo loo soo diro farriinno si firfircoon uga shaqeynaya hagaajinta nolosha qoysaskooda iyo bulshooyinka Waqooyiga Nigeria.
Saaxiibkeenna Waqooyiga Nigeria, RAND Corporation, wuxuu adeegsaday sahan fariin qoraal ah si uu u qiimeeyo barnaamijyada idaacaddayada ee gobolka.
Nigeria, Dhisidda Nabadda & Isbedelka Xag-jirnimada, Kaqeybqaadashada Warbaahinta & Teknolojiyada, Cilmi baaris & Barasho
Ka Hortagga Xag-jirka Xag-jirnimada ee Nigeria
Iskaashiga gabadha ayaa kor u qaadaya waalidiinta si ay u qoraan hablaha dugsiga
EAI waxay iskaashi la sameysay Girl Rising si ay u soosaarto lix sheeko oo khasab ah oo sii xoojineysa dhammaan xuquuqda ay gabdhaha u leeyihiin waxbarashada Waqooyiga Nigeria.
Nagala soo qaybgal dariiqooyinka wax ku oolka ah ee dhisidda nabada iyo sinaanta lamaanaha ee Waqooyiga Nigeria.